Imilebe njengelaphu lesakhelo sokwenziwa kweRed | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokubhekisele kwezithambiso, sizise amagcisa aliqela athi Basonwabisile ngendlela yabo yokusebenzisa ulusu njengeseyile efanelekileyo yokudala ii-cosplays okanye iimpahla ezinxunguphala kwezona zilumkileyo kubusuku beHalloween.
UAndrea Reed ligcisa lobugcisa elinombono oqaqambileyo sebenzisa eyakho imilebe njengeyona canvas ibalaseleyo yokwenza imisebenzi emangalisayo yobugcisa. Igcisa lobugcisa laseKhanada elisimangazayo ngeendlela zalo ezikhethiweyo kwezi foto zikhokelela kuthi ezinkulu okanye imilo yegqabi.
Kwinyanga ephelileyo besinomnye umzobi, UAndrea de la Ossa, esisondeze kufutshane inguqu yabo ibe zizilo Zonke iintlobo zokutyiwa kukrebe kwezinye izinto ezinomdla kwaye zomdlalo.
Kukucinga kweReed's makeup okusizisela imilebe eyahlukeneyo eyahlukeneyo yazo zonke iintlobo zemibala yento eyiyo iphaneli yobusi, inyosi ebanjiweyo kwiikona okanye kwipateni eqhelekileyo yelaphu letafile ekhitshini. Ingcongolo isibonisa ubugcisa bakhe ngazo zonke iintlobo zeefomathi kunye noburhabaxa ukusinyanzela ukuba sicinge ukuba siphambi kwemilebe, ewe, intle kakhulu kwaye inobuhle, ilungele ukuyihombisa ngobuchule beli gcisa laseCanada.
Enkosi ngalo msebenzi womlomo, Reed ikwazile ukufezekisa ngaphezulu kwe-100.000 yabalandeli kwi-Instagram. I-makeup esondeleyo kuleyo yabanye abaninzi abanjengoLaura Jenkinson okanye uTal Peleg abasebenzisa iinxalenye zobuso babo ukusisa kubalinganiswa beDisney okanye iikati ezibonakala ngathi zitsaliwe kwiliso lomzobi.
Unayo I-Instagram yomhlanga for landela umsebenzi wabo ngokusondeleyo kwaye ujonge imilebe emitsha enomdla nazo zonke iintlobo zoburhabaxa, imibala, imizobo kunye neepateni, kunye nezinye izindululo zobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umculi we-Makeup uguqula imilebe yakhe ibe yimisebenzi yobugcisa emangalisayo